ट्रम्प-किमको भेटघाटमा पुरै खर्च व्यहोरोर सिंगापुरले के–के पायो ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
ट्रम्प-किमको भेटघाटमा पुरै खर्च व्यहोरोर सिंगापुरले के–के पायो ?
Posted by Pariwartan Devkota | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:४५ |
३१ जेष्ठ, काठमाण्डौं । सिंगापुरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता कीक जोङ उनबीच शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेर ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ । दुई नेताबीच शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर सिंगापुरलाई फाइदा के भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन थालिएको छ । यो सबालको जवाफ ठोस आउन सकेको भने पाइँदैन ।
जवाफ हेर्ने हो भने, सिंगापुर निष्पक्ष राष्ट्र हो । जसको सम्बन्ध अमेरिका र उत्तर कोरिया दुबैसँग रहेको छ । सिंगापुरको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै मजबुत छ । त्यस्तै सिंगापुरसँग शिखर सम्मेलनको अनुभव छ । जसले सन् २०१५ मा चीन र ताइवानका नेताबीच पनि फलदायी भेटघाट सम्पन्न गरेको थियो ।
सिंगापुर ब्रान्ड बनेको हो त ?
केहि मानिसले ‘ब्रान्ड सिंगापुर’ मजबुत भएको छ । यसले सित्तैमा आफ्नो ‘पब्लिसिटी’ गराएको छ । सिंगापुर एक ब्रान्ड हो । जो जहाँ पनि बिक्छ ।
उत्तर जे आएपनि आखिर एउटा देशले अरु देशका नेताको भेटघाटका लागि १०० करोड किन खर्च गर्छ ? मुख्य सबाल यो पनि हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ, ‘ देयर इज नो सच ए थिंग एज ए फ्रि लन्च’ अर्थात् सित्तैमा कसैले लन्च खुवाउँदैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा ‘एक हातले लिने र अर्को हातले दिने’ फर्मुला नै बढि लागू हुन्छ ।
सम्मेलनबाट वर्तमानमा सिंगापुरको ख्याती ह्वात्तै बढाएको छ । दुई नेताले सिंगापुरलाई धन्यवादको पात्र पनि बनाएका थिए ।
भविष्यमा सिंगापुरलाई फाइदा
शिखर सम्मेलनको समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नका लागि संसारभरका २५०० भन्दा बढि सञ्चारकर्मी भेला भएका थिए । धेरैले सिंगापुरसँग खुशी भएको बताएका थिए । अष्ट्रेलियाका पत्रकार नील साइमनले सिंगापुरले आफूलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए ।
इन्डोनेसियाबाट आएका पत्रकारहरुको समूहले सिंगापुरको व्यवस्थापनको खुले प्रशंसा गरेका थिए । सम्मेलनबाट सिंगापुरलाई दुरगामी फाइदा पुग्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा उत्तर कोरियाको आर्थिक अवस्था पुनर्निमाण भएको खण्डमा त्यसको जस पनि सिंगापुरले लिने देखिन्छ ।
सिंगापुर एसियाको व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको छ । दुनियाँको लोभलाग्दो केन्द्र पनि हो । सिंगापुरको अर्थतन्त्र बीचमा बसेर काम गर्दा हुने फाइदाबाट चलेको छ । सेवा उद्योगबाट सिंगापुरले धेरै पैसा कमाइरहेको छ ।
५५ लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार अमेकिरी डलर छ । यो विकसित देशको भन्दा पनि धेरै हो । सिंगापुरका व्यापारीका अनुसार सरकारले नागरिक भन्दा पनि नयाँ सिप र क्षमतालाई बढावा दिने किसिमका क्रियाकलापमा जोड दिँदै आएको छ । सिंगापुरले दीर्घकालिन फाइदालाई मध्यनजर गरेर आफूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
कुनै दिन उत्तर कोरियाले विदेशी लगानी खुला गर्दा सिंगापुरको कम्पनीलाई धेरै फाइला पुग्नेछ । सिंगापुरले आफ्नो लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
दुई नेताबीच शिखर सम्मेलन विना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको छ । सिंगापुरले यो ऐतिहासिक मौकाको फाइदा भरपुर उठाएको छ । साथै व्यापारको नयाँ मार्ग पनि प्रशस्त गरेको छ ।
Previousनेपालमा फुटबलको प्रारम्भ भारत सम्बन्धबाट सम्भव !
Nextपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फिर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई सरकारभन्दा माथि छु भन्ने संदेश दिन खोजेको छ : प्रधानमन्त्री
२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार १६:४७
विश्वकपः अहिले सम्म कुन-कुन टिम बहिरिए ? कुन टिमको कस्तो सम्भावना ? (विस्तृत पढ्नुहोस)
११ असार २०७५, सोमबार १२:५३
लाप्राक एकीकृत नमूना वस्तीको प्रधानमन्त्री दाहालले शिलान्यास गरे
२१ आश्विन २०७३, शुक्रबार १६:०१
कांग्रेसको अबरोधका कारण संसद बैठक शुक्रबार सम्मका लागि स्थागित
९ असार २०७३, बिहीबार १४:१६